Afsoomaali - Omsorgs Compagniet
OmsorgsCompagniet waxaa la asaasay sanadki 2003 waxaanay xooga saartaa dadka da’da weyn, iyo kuwa coryaamiinta ah ama u baahan caawimaad ama daryeelka guriga. OC United waxaay qayb ka tahay OC, waxaanay ku takhasustay dadka ka soo jeeda dhaqamada kale kuwaasoo dhibaatooyin ka haysata helitaanka taagyeerada carqalada xaga luuqada awgeed iyo caawimada. OC, waxaad ka helaysa taagyeero ah qof ku hadlaya luuqadaada iyo dad aqoon u leh sharciyada una halgamaya waxa aad xaq u leedahay.
Waxaan mar kasta diyaar u nahay inaan ku siino caawimaad sharci ah hadii aad na weydisanaysid taagyeero dheeraad ah sidookale go’aanada rafcaanka ay samaysay doowlada hoose ama xafiiska caymiska bulshada.
Caawimaada shakhsi ahaaneed
Anaga oo ah OC waxaan ku siinaynaa caawimaad wanaagsan anaga oo raacayna qiimaheena asaasiga ah, qaabka shaqada iyo higsashadeena inay noqoto lambarkaaga koowaad ee doorashada qaybta daryeelka.
Waxaan kuu xaqiijinaynaa inay taagyeero ku siinayaan dadka nooca ku haboon; waxaan sidookale ijaaranayna qaraabadaada hadii ay taas cadaato inay tahay go’aanka ugu fiican. Waxaan kuu soo dirayna bil kasta warbixin ku saabsan xaaladaada dhaqaale, taaso ka dhigan in mar kasta 100 % lagu soo wargelinayo.
Waanu ognahay dhibaatooyinka manta ee xaga helitaanka waxayaabaha looga shaqeeyo adeega taagyeerda- guriyadi hore ee ku saabsan dadka da’da weyn ee ka soo jeeda dhaqamada kale. Taas ayaa ah sababata uu daryeelkeenu u sareeya si aanu kugu xaqiijino inaad helaysid tagyeerada aad u baahantahay, iyo qofka ku haboon inu tagyeera ku siiyo. Ha ahaado qof adiga aad dooratay ama qaraabadaada, mar kasta waxaad helaysa ugu dambaynti qofka aad dooratid ee ah ka kula shaqaynaya.
c/o My office